TechGameBox - Gamers World
Mutambo we play station
Yemahara Pride zvinhu zvinouya kuTwo Point Campus pakuburitswa
2 July 2022 by Alistair McDonald
Zvemahara mu-mutambo Pride zvinhu zvichaverengerwa muTwo Point Campus painoburitsa musi wa9 Nyamavhuvhu. Paki yechinhu ichi inosanganisira zvinhu zvine muraraungu zvinhu zvakaita semaragi, zvekurara, mireza nezvimwe, uye zvichave zvemahara nekusingaperi pamapuratifomu ese. source
Categories nhau Leave mhinduro
Pokémon Go dev anonzi akamisa 8% yevashandi, akadzima mamwe mapurojekiti mana
Pokémon Go anovandudza Niantic anonzi akapisa nhengo makumi masere neshanu kusvika makumi mapfumbamwe evashandi vayo uye akadzima mana emapurojekiti ekusimudzira - kusanganisira mutambo wakamboziviswa weTransformers uye kubatana nekambani yemitambo Punchdrunk - pakati pe "kusagadzikana kwehupfumi" kukambani. Mune meseji, Hanke anonzi akapomera kudzima chirongwa chanhasi uye ... Read more
Off Topic: Rudo runotumbuka parukwa mukati Aya ndiwo Makurusa kwaunoita Hondo Yenguva
"Bhuru rangu rinonyengera." Tsvuku inonyorera kuBlue. Anosiya tsamba yake mupoto ine mvura iri kufashaira mumushini weMRI. Bhuruu inonyorera kuRed. Anosiya tsamba yake mune spew of magma sezvo Atlantis inoparadzwa. Zvishoma nezvishoma, zvinouya kwandiri kuti iyi ndiyo - ndeipi temu yakakanganwa? - epistolary ... Read more
Tarisa yanhasi Nintendo Direct pano
1 July 2022 by Alistair McDonald
Chekupedzisira, isu tine yakakodzera Nintendo Direct set muhurongwa. Tune in na2pm UK nguva yechiziviso inotora maminetsi makumi maviri nemashanu, yakatarisana nemitambo yebato rechitatu. Tarisira kutarisa kuChinja mitambo yakagadzirwa nemamwe makambani kunze kweNintendo - saka, hapana tariro yeZelda: Breath of the Wild 25 nhau pano. source
Hideo Kojima akamboronga superhero chirongwa chakafanana neAmazon's The Boys
Rufu Stranding's Hideo Kojima akaburitsa pachena kuti aimbobika chirongwa chakafanana neAmazon's superhero series The Boys. "Ndakasiya mushure mezvikamu zvitatu zvemwaka wekutanga," Kojima akanyora paTwitter, achikurukura nezvenyaya iyi. “Ndaifunga kuti ndichaona imwe shoo. Chaizvoizvo, ndakatarisa zvikamu zvishoma zvakaunzwa pa… Read more
Indasitiri yemitambo yemavhidhiyo yeQuébec ichakanganiswa nemutemo wemitauro une gakava
Makambani emitambo yemavhidhiyo muQuébec achakanganiswa nemutemo mutsva une gakava remutauro. Chinangwa cheBill 96 ndechekusimbisa mitemo yemitauro yepurovhinzi inotaura chiFrench, kuve nechokwadi kuti French ndiyo mutauro mukuru unotaurwa mune zvese kubva kubhizinesi kusvika kune hutano. Nekudaro, zvinotyirwa kuti izvi zvichadzinga vasiri vatauri veFrench kubva kuQuébec yakakura yemitambo yemavhidhiyo indasitiri. … Read more
Nekutsoropodza panned Blade Runner remaster ikozvino inosanganisira isina-remastered vhezheni paSteam
Dev tweets yekutanga mufananidzo wePS VR 2 musango, anoibvisa
Tese tinoziva kuti yave munzira, asi iyo PS VR2 ichiri yakavanzika kune avo vedu vasingazive nezve mukati mekushanda paSony. Nekudaro, mumwe mugadziri akagovana (uye nekukasira kubvisa) mufananidzo wePS VR2 wakaiswa munyika chaiyo. Mufananidzo wacho wakabva kuBit ... Read more
Resident Evil's nyowani PC zvigamba zvinokanganisa zvinoonekwa uye kurova kuita zvakanyanya
Ini handina zvakawanda zvakanaka zvekutaura, asi hapana kupokana nezvazvo: ray yekutevera rutsigiro inopa inosimudzira kumhando yese, kunyanya nekuti maratidziro eRT anotsiva anotyisa skrini-nzvimbo inoratidzira inowanikwa mune yekare vhezheni. Ray-inoteedzerwa kuvhenekera kwepasirese zvakare yakanaka yekuwedzera poindi, kutsiva skrini-nzvimbo ambient occlusion ine zvakawanda chaizvo… Read more
Harvestella inoita kunge Final Fantasy inosangana neStardew Valley
Harvestella ihupenyu hutsva sim RPG kubva kuSquare Enix kuuya kuChinja uye Steam munaNovember. Ndiyo Final Fantasy inosangana neStardew Valley, ine mutambo wekutamba unosanganisira kuchengetedza zvirimwa, kushamwaridzana nevanhu vemudhorobha, uye kuongorora makomba. Concept art yakaitwa naIsamu Kamikokuryo weFinal Fantasy 12 mukurumbira, uye mimhanzi yakaitwa naGo Shiina kubva kuTales series. … Read more
Gmail yeAroid, iOS wedzera zviri nyore 'Kuchengeta kushandiswa' chiratidzo
30 June 2022 by chiratidzo
Padandemutande, Gmail yagara yaona kuti yakawanda sei kuchengetedza yauri kushandisa pazasi pepeji. Chiratidzo che "Chengetedzo chinoshandiswa" chave paGmail yeAroid uye iOS kuti ikuchengetedze kubva pakuda kuvhura imwe app kana webhusaiti yekutarisira nzvimbo. zvimwe…. Original Article
Categories Tech Leave mhinduro
RIP RTX 3080 12GB - haufanirwe kunge uripo pakutanga
Nvidia inofungidzirwa kuti yakamisa kugadzirwa kweiyo GeForce RTX 3080 12GB kadhi yemifananidzo, iyo yakanyanya kusimba musiyano weiyo yekutanga RTX 3080 GPU. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti ichi hachisi chiziviso chepamutemo saka tora ruzivo urwu nepini yemunyu, asi Twitter mushandisi uye GPU anofarira @Zed_Wang anoti kadhi harizo… Read more
Categories KUDZOKORORA Leave mhinduro
Asus ROG Runhare 6 inouya Chikunguru 5 nekuramba kwemvura uye imwe inopenga inotonhora fan
Iyo Asus ROG Runhare mutsara wanga uzere nesarudzo dzine simba uye dzakaitwa zvakanaka, uye modhi nyowani ichangosvika pakona. Padivi pemamwe mavuza, isu tava nezvinotaridzika kunge zuva rekuburitswa kweAsus ROG Runhare 6. zvimwe… Yekutanga Chinyorwa
peji1 peji2 ... peji3,969 Next →
© 2022 TechGameBox • Yakavakwa ne GeneratePress